Jazeera oo Jiiday Jeenyo | Somali National Television - sntv.so
Home CIYAARAHA Jazeera oo Jiiday Jeenyo
Jazeera oo Jiiday Jeenyo
Kooxda Kubada Cagta Jeenyo ayaa la kulantay guuldaradii sagalaad ee soo gaarta Sanadkaan Sagaal Kulan oo ay Ciyaartay Kulamada Horyaaka Soomaaliya kadib markii ay la Ciyaarta Kooxda Jazeera oo sanadkii hore ka soo dalacday Horyaalka heerka labaad ee dalka waxaana Jeenyo Looga adkaaday 1-0 kulan galabta ku dhex maray Garoonka Banaadir.
Guusha Kooxda Jazeera ayaa ah guushii sadexaad oo ay gaartay sagaal kulan oo ay Ciyaartay Sanadkaan Horyaalka Soomaaliya waxaana ay ugu mahad celinaysaa Aghahowa oo u saxiixay goolka kaliya ay ugu adkaatay dhigeeda Jeenyo.
Jazeera hada waxay leedahay Toban dhibcood waxaana ay ka sare martay kooxaha Gadiidka iyo Madbacadda, ayadoo ku dhibco noqotay kooxda Kooxda Midnimo oo kaalinta lixaad kaga jirta kala Horeynta Horyaalka Soomaaliya.
Jeenyo iyo Jazeera waa labada kooxod ee la kulmay guuldarooyinka ugu badan Horyaalka Soomaaliya Xili Ciyareedkan, Jeenyo waxay lumisay 8 kulan Sagaal kulan oo ay soo Ciyaartay halka Jazeera laga adkaaday 5 Kulan Sagaal kulan oo ay soo Ciyaartay.
Jeenyo waa kooxda kaliya ee laga adkaaday 8 Kulan dhamaan Tobanka kooxod ee ku tartamaya Horyaalka, Sidoo kale waa kooxda kaliya ee aanan hal kulan barbaro gelin dhamaan Kulamada ay Ciyaartay.
Dhanka kale Jeenyo ayaa sidoo kale ah Kooxda goolasha ugu badan laga dhaliyay Sanadkaan Horyaalka Soomaaliya, 25 gool ayaa laga dhaliyay waxaana shan gool ay dheer tahay kooxda Jazeera oo ah Kooxda Labaad ee goolasha ugu badan laga dhaliyay Sanadkaan Horyaalka Soomaaliya oo ay la Ciyaartay galabta kulankeeda ugu danbeeyay wareega hore ee Horyaalka Soomaliya.
Previous articleShirka Golayaasha Xeer-dejinta Dowladda Federaalka iyo M/Goboleedyada oo ka furmay Garoowe
Next articleQM oo ku baaqaday in la joojiyo dagaalka ka socda Libya